Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ala ọma jijiji siri ike 7.1 mere na Acapulco, Mexico na -akpọ Orange, nke nwere ike ibibi ihe
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Guerrero bụ steeti n'ụsọ oké osimiri Pacific na Mexico. Obodo ama ama nke Acapulco, nke etinyere na nnukwu ọdọ mmiri nke ugwu dị elu na ugwu Sierra Madre del Sur, mara maka ndụ abalị na oke osimiri dị ike n'akụkụ Acapulco Bay na mpaghara Acapulco Diamante.
A tụrụ ala ọma jijiji dị 6.2 na elekere 8.47 nke mgbede, ọzọ 7.1 ala ọma jijiji ka nkeji ole na ole gachara, 7.4 ọzọ dakwara mpaghara sekọnd mgbe e mesịrị. Ihe karịrị nde mmadụ abụọ bi n'ime kilomita iri site na ala ọma jijiji ahụ.
Ala ọma jijiji ahụ bụ USGS wepụtara ya Orange wee gbanwee ka ọ bụrụ 7.0 ma mesịa laghachi na 7.1
Njikere oroma maka ọnwụ metụtara mkpatụ na mfu akụ na ụba. Ọnwụ na mbibi dị egwu nwere ike bụrụ na ọdachi nwere ike gbasaa ebe niile. Ịma ọkwa oroma n'oge gara aga chọrọ nzaghachi mpaghara ma ọ bụ nke mba. A na -atụkarị mmebi na ụdị a n'etiti nde 100 ruo ijeri 1, ihe na -erughị 1% nke GDP nke Mexico.
Ọ bụrụ na ị nwere ezinụlọ na Acapulco, Morelos ma ọ bụ Mexico City Biko lelee ha, nke a ala ọma jijiji abụghị egwuregwu !!!
A na -eche na ala ọma jijiji oroma nwere ike bute ọnwụ na narị otu narị ma ọ bụ puku.
National Seismological Service akwalitela ala ọma jijiji nke dara n'ụsọ oké osimiri Pacific na Mexico ruo 7.1. Ebe ntụpọ ahụ dị nso na mpaghara Acapulco. Ala ọma jijiji ahụ mere ka ndị bi na ndị njem banye n'okporo ámá ma maa jijiji ruo ebe dị anya na Mexico City.
Ọ bụghị ọtụtụ akụkọ na -abịa site na Acapulco na -egosi enweghị ntụkwasị obi.
#Ozi Ozi Mba | Un sismo de magnitud 7.1 cerca de Acapulco #México se registró la noche de este martes. Autoridades no han reportado pérdidas humanas hasta el momento no daños de gravedad. pic.twitter.com/bl3C0nfv0T
- Ama Loja (@infolojaec) September 8, 2021
Nke a bụ atụmatụ USGS mere
N'ozuzu, ndị bi na mpaghara a na -ebi na ụlọ nke bụ ngwakọta nke ihe na -adịghị ike na ala ọma jijiji. Ụdị ụlọ na -adịkarị mfe bụ mgbidi apịtị na ogidi Adobe nwere ihe owuwu ihe njikọ.
Ala ọma jijiji na nso nso a na mpaghara a ebutela ihe egwu nke abụọ dịka ebili mmiri na mbuze nke nwere ike bute mfu.
Dị ka USGS si kwuo, enweghị egwu ebili mmiri nke Pacific n'ihi ala ọma jijiji a. Ọ bụ ndị ọchịchị obodo kpalitere ịdọ aka na ntị maka oke mmiri ozuzo maka Oke Osimiri Pasifik nke Mexico. Enweghị akụkọ a maara banyere ebili mmiri na ebe ọ bụla n'oge a.
Ugbu a ala ọma jijiji a na Mexico nwere mmetụta dịka
dị ike site na 756,000+
Ike site na 379,000+
Gbanwee site na 873.00+
Ìhè site na 22,985
Adịghị ike site na 25,754
Ọ bụ n'oge na -adịghị anya ikwu oke mmebi ala ọma jijiji a kpatara.
Ebe ntụpọ ahụ bụ kilomita 8 na ndịda ọwụwa anyanwụ nke #Acapulco, Guerrero. A na -ekwupụta ọkụ eletrik na mgbapụta gas.
A tụlere ihe iyi egwu mbufịt oke osimiri Pacific na kagbuo.
Enwere ike ịdaba ala n'ebe dị nso, mana o yikarịrị ka ọ ga -emetụta naanị mmadụ ole na ole.
Mmetụta ọ na -emetụta ọnụ ọgụgụ ka ukwuu na mpaghara Acapulco nwere ike bụrụ na a na -enyocha ya.
Ala ọma jijiji ahụ mere ka ndị mmadụ nọrọ n'ebe dị anya na Mexico City na -agbaba n'okporo ụzọ.
Dị ka akụkọ mpaghara si kwuo, ala ọma jijiji ahụ mere naanị kilomita 18 site na obodo ezumike Acapulco ma nwee ike inwe nnukwu mmetụta.
#ÚLTIMAHORA #Sistem de magnitud 7,4 nke #Acapulco.#Tereremoto #Ala ọma jijiji #México pic.twitter.com/IohZbjlGVv
𝙈𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙮@(@Mario_Moray) September 8, 2021
Ala ọma jijiji ahụ nwere ike imebi ihe, eTurboNews ga -eso akụkọ ọhụrụ a.
USGS tinyere ala ọma jijiji ahụ siri ike 7.0 ma tụọ ya na elekere 8.47 nke abalị mpaghara Acapulco. ma ọ bụ 1.47 am UTC na Septemba 9
Ọnọdụ: 16.950 ° N 99.788 ° W nwere 12.6. omimi.
Vidiyo a sitere na agbataobi Rome Norte nke Mexico City n'oge ala ọma jijiji ahụ bụ ihe nyefere onwe ya #Mexico # Akụkọ Ọhụụ #MexicoCity #ala ọma jijiji pic.twitter.com/ns0gjhdnXM
- John Ịmata ozi ọma 2 (@johnkwado2) September 8, 2021
#Na -agbaji: Akụkọ mbụ nke mmebi na Acapulco, #Mexico, na -esote ịdị ukwuu 7.4 #nke ala ọma jijiji. pic.twitter.com/M21wOO0XkE
Ala na -ama jijiji ruru Mexico City.
VIDIO: Esere ihe nkiri na nso Acapulco, Mexico mgbe ala ọma jijiji 7.4M gasịrị. CHAỊ!
AHỤTA: @Heidiaca pic.twitter.com/fJILJQ8biF
- Mkpesa Akụkọ United States (@USNewsBlock) September 8, 2021
eTurboNews ndị na -agụ akwụkwọ na Acapulco nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na WhatsApp, Ekwentị, email na https://travelnewsgroup.com/post/